Ribadu ma ganacsi xun baa? Qeebta kowaad – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Sida ku soo aroortay aayada 275aad ee suurada Al-Baqara, ganacsatadii carbeed ee la nooleed nabi Maxamed ka dib markii lagu yari ka joogsada ku dhaqanka Ribada, ay ku andacoodeen in ”Ganacsiguba uu yahay sida Ribadda uun”.
Inkastoo Quraanka laftiisuba ku diidin arankaas kunasa raacin, hadana waxaan filayaa in muhiim tahay bal in lafaguris arinkaas lagu sameeyo, si looga sal gaaro run-ahaan-shiyaha arinkaas.
Hadaba si ay taasi noogu suurtagasho, waxaan lagama maarmaan noqoneyso inaan bal marka hore isla fahaan labo arimood , kuwaas oo kala ah Ganacsi iyo Ribo, si markaa kadib aan u kala ogaano in ay isku mid yihiin iyo in kale.
Hadaba waa maxay Ganacsi/Trade?
Dabcan dab badni ganacsiga wuxuu uula muuqdaa wax aad u adag fahankiisa, balse hadaad u fiirsato, ganacsigu gabi ahaantiisba wuxuu isugu soo aruuraa uun ”wax wax kale lagu badashay”, waa laba qof ama koox oo uu midba midka kale waxa uu heesto kaga badalanayo waxa uu rabo inuu helo. Tusaale ahaan, Garaad wuxuu heystaa kiilo digir ah, Jimcaalane kiilo ganleey ah, Garaad waxaa ka maqan uu baadi goob ugu jiraa kiilo ganleey ah, halka Jimcaale uu aad ugu baahan yahay kiilo digir, hadii Garaad iyo Jimcaalo ay kala badashaan kiilada digirtaa iyo ganleyda, halkaas waxaa ka dhacay ganacsi. Waa intaa uun ganacsi.
Aan u imaano Ribada marka, Ribooy yaa tahay?
Ribada iyadoo fududi waa sadax nuuc midood; midi waa in labo wax oo isku nooc ah balse kala badani la isku badashaa, tusaale ahaan kiilo bur ah oo lagu badashaa labo kiilo oo bur ah. Midina waa in laba wax oo isku nuuc ah la isku badashaa iyadoo isku badalashada labada wixi aysan markaa dheceen, tusaale ahaan ahaa in kiilo digir ah lagu badashaa kiilo digir ah balse bisha dambe soo go’eeyso. Iyo midda sadaxaad oo ah in labo wax oo kala duwan la isku badashaa balse isku badalashadu aysan markaa dhicin, tusaale ahaan in kiilo bur ah lagu badashaa kiilo ganleey ah balse aan hada diyaar eheen, oo la bixin doon bil ka dib.
Kadib markaan ka soo faraxalanay waxa Ganacsi ama Ribo ay yihiin, hadaba su’aasha isweydiinta mudani waxay tahay, ribo iyo ganacsi ma wax kala duwan baa mise waa sidii ay odayaashii carbeed ku andacoonayeen isku mid ?
Sida muuqato, oo aan kor ku soo xusnay ba, hadii gancsigu yahay uun ”wax isku badalasho”, ribaduna tahay qaab ka mid ah ”wax isku badalashada”, hadaba halkaas soo kama dhalaneyso in Ribadu tahay nooc ganacsiga ka mid ah uun, sidaa awgeed sow ma dhihi kareeno odayaashii carbeed kuma aysan qaldaneen inay ku andacoodaan rabadu waa ganacsi.
Balse su’aasha ah ribadu ma ganacsi wanaagsan baa mise aan wanagsaneen, waa arin ka baxsan xeendaabka qormadaan, oo iyana u baahan in la is dul taago waqtigeeda, balse ujeedka qormadaan kaliya wuxuu ahaan inaan bal baarintaan ku sameyso in ribada iyo ganacsigu kala duwanyihiin iyo inkale, balse sida muuqataa waa uun wiil iyo aabihii.